I-Aerofly FS 2 Flight Simulator, indiza esiza ku-Mac App Store | Ngivela kwa-mac
Kubukeka sengathi imidlalo yendiza iyona yonke intukuthelo e-Mac App Store futhi kungukuthi ezinsukwini ezimbalwa futhi sibone ezinye zazo zifika. Kulokhu, esinakho ngumdlalo we-flight simulator njengoba kukhonjisiwe egameni uqobo: I-Aerofly FS 2 Flight Simulator. Lo mdlalo nawo usanda kukhishwa esitolo sohlelo lokusebenza lwe-Mac futhi ubhekiswe ngqo kuwo yabasebenzisi abathanda ukundiza futhi ikakhulukazi kwimodi yokulingisa.
I-Aerofly FS 2 Flight Simulator, ngumdlalo onomfanekiso obonakalayo futhi yingakho encazelweni uqobo bancoma ukuthi ngaphambi kokuthenga ake sibuyekeze izidingo ezisezingeni eliphansi ku-Mac yethu ukugwema izinkinga zokusebenzisa.
Ngomdlalo we-Aerofly FS 2 sizokwazi ukuzwa izinga elingokoqobo lokuba ngokoqobo endizeni, kuzosivumela ukuthi sithole isipiliyoni esimangazayo sibonga imininingwane ye-3D yomgibeli wamabhanoyi wendiza nayo yonke eminye imininingwane ecacile. Lesi yisimangaliso sendiza entsha yesizukulwane esisha futhi ine-physics yendiza eyiqiniso, ngaphezu kwalokho izindiza zinemininingwane eminingi futhi namathafa ayamangalisa ngenkathi sihamba.
Ine-interface enembile yomsebenzisi futhi ayidingi cishe isikhathi sokuqeqeshwa kulabo abasetshenziselwa lolu hlobo lwe-simulator. Njengoba simemezele ekuqaleni kwendatshana, izidingo eziphansi Yilezi ezilandelayo:
Umseshi: 2.0 GHz
Iba ne-macOS: 10.13 noma ngaphezulu
Isikhala samahhala: 64 GB
Imidwebo: Ikhadi lemidwebo le-NVIDIA noma le-AMD elino-512 MB. Asincomi ukusebenzisa i-Aerofly ngamakhadi wehluzo asuselwa ku-Intel
Idivayisi yokufaka: Iphedi yemidlalo ezinikezelwe nge-USB / i-Bluetooth noma induku yokudlala ye-USB
I-Aerofly FS 2 Indiza Simulator35,99 €
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Izinhlelo ze-Mac » Imidlalo » I-Aerofly FS 2 Flight Simulator, indiza esiza ku-Mac App Store
gustavo adrian guilarte gonzalez kusho
Ngifakelwe umdlalo kepha inguqulo yami ye-mac ingu-10.12 futhi uma ngiyinika ukuphawula ngomdlalo ayingivumeli .sera ngoba ngidinga uhlobo olubanzi lwe-mac ngokwesibonelo 10.13
Phendula ku-gustavo adrian guilarte gonzalez
sawubona ngiwuthengile lo mdlalo ngoba ngibonile ukuthi unezici zenguqulo yami ye-macOS sierra 10.12.6 kuphela ukuthi imidwebo yami i-Intel HD 6000 1536 MB lapho ngiqala umdlalo awuvuleki. Ungangisiza ngithole isisombululo ngifuna lo mdlalo engiwuthenge esitolo sezinsiza ezinsukwini ezimbili ezedlule ngiyabonga
Lungisa izinkinga nge-WiFi ku-Mac yakho ngokuphatha uhlu lwamanethiwekhi abhalisiwe